Maitiro ekuisa Krita muSpanish | Linux Vakapindwa muropa
Nguva dzese iyo Krita graphic mupepeti iri kuramba ichizivikanwa, ichisvika maturusi sePhotoshop kana Gimp. Asi kwete muGnu / Linux chete asiwo mune mamwe masisitimu anoshanda seWindows kana Mac OS.
Ini munguva pfupi yapfuura ndakafunga kuyedza ino inozivikanwa yemifananidzo edhita seyakajairika application kana ndichigadzirisa mifananidzo yangu uye ini ndikamhanya muchinetso: Krita aive muChirungu. Pano ini ndoda kukuudza Ini ndakawana sei iyo Krita application kuratidza muSpanish?.
Iye zvino Ini ndinoshandisa Plasma seye default desktop uye ndanga ndaiisa muchiSpanish, asi izvo hazvina kuita kuti Krita aratidzike muSpanish, mamamenyu ake aive achiri muChirungu. Ndokusaka ndakafunga kutarisa mamenu ekushandisa. Vhura Zvirongwa-> Chinja Mutauro Wekushandisa-> Mutauro wekutanga-> Spanish tinogona kuisa chikumbiro muchiSpanish. Asi ini ndaive ndichine dambudziko uye ndizvozvo muPrimary Mutauro ndaingoona American English kwete Spanish. Ndingagadzirisa sei izvi?
Kunyangwe Plasma iri muchiSpanish, Krita haizove muchiSpanish pasina mapakeji anodikanwa
Mhinduro kudambudziko remutauro iri kuburikidza kuiswa kwepakeji yemitauro iyo dzimwe nguva patinenge tisina kuisa mune yedu yekushandisa system. Pasuru iyi inonzi Krita-L10n, iyi pasuru ndiyo ine mitauro yekushandisa uye iyo inobatanidza mutauro wedesktop pamwe nekushandisa.
Saka ndakavhura iyo terminal ndokunyora zvinotevera:
Mushure mekuisa iyi package, Iwe unenge watove neKrita muSpanish sezvakaita mamwe ese maapplication. Zvisinei, kana mushure mekuisa pasuru yapfuura, Krita haango pinda muchiSpanish, saka tinofanirwa kuita oparesheni yapfuura mumamenyu, ndiko kuti, enda kuZvirongwa-> Chinja Mutauro Wekushandisa-> Mutauro Wekutanga-> Spanish. Nezvo, Krita mupepeti achave ari muchiSpanish uye isu tichakwanisa kuishandisa pasina dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa Krita muSpanish
Negative, iwo murairo haugone kuwanikwa kubva kuchipatara changu
Ini ndaisa Linux Mint 18.1, CINAMMON desktop (ndinofunga kudaro), asi izvo zvandakaisa kubva kumagumo hazvina kushanda. Krita inonakidza kwazvo uye inopesana sei neWindows yakaiswa muSpanish ...
Pane imwe nzira here?
Ndakaedza zvakare ndikaona meseji kubva kune iyo terminal inoti: Iyo package krita-l10n yatadza kuwanikwa
Zvakanaka sezvandiri kuona ini handisi kuwana mhinduro kuchinetso chemutauro muKrita.
Ndinozvidemba kuti izvi ndizvo, zvinoratidza kushomeka kwebasa pane chero munhu akaburitsa chinyorwa ichi.
Zvirinani ndingadai ndakapindura kuti hazvina kushanda uye zvaizogutsikana.
Ruben tarisa apa: https://packages.debian.org/search?keywords=krita-l10n
Unzip uye uwane krita.mo
Ini ndaive nayo muchiSpanish kubva kuMexico, ndaifanirwa kuchichinjira kuSpanish kubva kuSpain kuti chishande.
Izvo zvave zvakakwana kwandiri. Krita-l10n yaive mune "yakatambanudza" zvinyorwa, ndakaiisa uye… ndizvozvo! Pasina matambudziko uye zvakananga.
Pindura kuna josé
Kuti uchinje mutauro waKrita kuSpanish, vhura chinongedzo wobva wanyora unotevera kuraira ...
sudo inokodzera kuisa calligra-l10n-es
Vanobva vaenda kuZvirongwa-> Chinja Chishandiso Mutauro-> Mutauro wekutanga-> Spanish uye wotangazve Krita.
Ndinovimba ichakushandira iwe.
Ndatenda zvikuru, nemutemo wakakurudzirwa wakachinja mutauro wangu chiuru chekutenda.
Diego Plaza Jimenez akadaro
Tevere, ini ndinokusiya iwe link kune peji, kwaunogona kurodha zvakananga Krita's Spanish dudziro mu * .deb fomati
Yakandishandira nenzira kwayo uye pasina dambudziko, uye maitiro acho anongoerekana aitika.
Kwazisai vese uye ndinovimba zvinoshanda kwamuri seni.
Pindura Diego Plaza Jiménez
Zvakashanda zvikuru kwandiri paKubuntu
Zvese zvinhu zvakakwana, kuraira kwangu kwekutanga kwakaiswa mu linux uye… .. zvakashanda haha ​​ha
Pindura kuna maxmonzon
Ndatenda kwazvo, zvakandishandira zvakanaka pa xubuntu!
Ndatenda kwazvo, zvakandishandira otomatiki mushure mekuiswa kwepakeji
Yakashanda zvakakwana. Ndatenda!
Yakashanda zvakakwana kwandiri. Ndatenda, hama.
Ndatenda kwazvo zvakandishandira muLinux Mint
Huge mudiwa wangu!
Chishamiso chakazoitika ...
Israeri Salcedo akadaro
Ndatenda zvikuru, zvinoshanda zvakakwana paUbuntu Studio 20.04 vhezheni.
Pindura kuna Israel Salcedo
TOLEDO TOWEL AMRAFEL JOHN akadaro
Yakandishandira nenzira kwayo, ndinokutendai nemupiro wenyu wakakosha
Pindura TOLEDO TOALA AMRAFEL JOHN
yakashanda zvakakwana kwandiri. Kubuntu 20.4, nekuisa yakakwana package, isina gadziriso.
Yakashanda zvakakwana, kusvika pakubata. Ndatenda!
Pindura kuna f_leonardo
January muguta akadaro
Hongu, yaive gumi pane yekutanga kuyedza kuburikidza neiyo terminal. Ndine LinuxMint. Ndatenda!
Pindura kuna January muguta
Maiker Benitez akadaro
Yakandiitira zvakakwana mubuntu 20.04LTS: D NDINOTENDA !!!
Pindura kuna Maiker Benitez
Hongu yakashanda kekutanga.